Ciidamada Amaanka Dhuusamareeb oo soo Furtay Gaadiid laga dhacay Magaaladaas – SBC
Ciidamada Amaanka Dhuusamareeb oo soo Furtay Gaadiid laga dhacay Magaaladaas
Ciidamada Maamulka Ahlsunna Waljamaaca ee gobolka Galgaduud ayaa soo furtay gaari maalmo ka hor ay qafaasheen kooxo dabley ah .
Ciidamada Amaanka Dhuusamareeb Xarunta gobolka ayaa saaka ku dhaqaaqay howlgal balaaran oo lagu doonayay in lagu soo furto gaarigaas ay kooxahani ka qafaasheen gudaha magaalada dhuusamareeb ka dib markii ay qoryo ku qabteen darawalkii gaariga iyo dad la socday mudo maalmo ka hor islamarkaana kala baxsaday halkaasi.
Sida la xaqiijiyay 3 qof ayaa ku dhaawacmay intii uu howlgalku soconayay kuwaas oo la sheegay in ay dhaawacmeyn ka dib is qabqabsi dhexmaray dadka deegaanka ay gaarigani ka soo qabteen ciidamada Amaanka .
Gudoomiyaha Degmada Dhuusamareeb C/raxmaan Cali Geeda Qorow oo la hadlay Xafiiska SBC International ee Gobolka ayaa sheegay in howlgalkaasi aan jirin wax dhibaato ah oo ka dhashay marka laga reebo dad ku dhaawacmay shaqaaqado dhexmaray dadka deegaanka laga fuliyay howlgalka kaas oo iyaga u dhexeeyay sida uu hadalka u dhigay, balse markii dambe ay ciidamada Amaanku ku bexeen.
Waxa uu sidoo kale xaqiijiyay gudoomiyuhu in saaka ciidamada Gacantooda uu ku jiro gaarigii la dhacay, waxaanu intaasi raaciyay in ay howlgalku gacan ka siiyeed dadka deegaanka iyo Odayaasha.
Ugu dambeyntii ma ahan markii ugu horeysay oo fal ceynkan oo kale ah uu ka dhoco gobolka balse waxaa dadka ku cusub in kooxo hubeysan ay bartamaha magaalada ay xili maallin ama Habeen ka geystaan fal afduub ah iyagoo adeegsanaya Hub.